1. Mutambo wemufaro wave pedyo nekupera kwegore. Vanhu vazhinji vanogadzirira Evha Idzva Idzva zvipo. Kunyangwe kuzviita iwe pachako Kana tenga zvipo zvekupa kune vaunoda Uye vanaamai vazhinji vanogona kunge vachigadzirira zvipo vana vavo kuti vabatanidzwe mumafaro neshamwari dzavo kuchikoro. Sechipo kana kushongedza chic yekona yeKisimusi isiri yakaoma Inopawo kunogutsa kunzwira kune vese mupi uye iye anogamuchira.
2. Zvishandiso Maitiro ekuputira akaenzana bhokisi
3. - Kuputira chipo Sarudza nenzira yatinoda kana kuenderana nemaitiro emunhu ari kupa. Kune vanhu vakuru, sarudza mavara akareruka, evana, iwo mapatani ekatuni. Kana akanaka mapatani mapatani - uta kana ribhoni, sarudza nenzira inoenderana neyepepa ruvara. Inogona kunge yakafanana toni kana ruvara rwakachekwa, vamwe vanhu vanoshandisa maruva akaomeswa, maruva matsva, kana nyore kuzviita wega, zvinongova chic neimwe nzira. Inogona kushandiswa Asi kana zviri zvevaenzi vakuru kana mukuru webasa, zvingave zvakakodzera kusarudza bhokisi riri nyore muvara, zvinoenderana nenguva uye kukodzera.
4. Nzira dziri nyore dzekuputira square kana chipo bhokisi
5. - Isa bhokisi rezvipo pabepa rekuputira iro rakatemwa. Uye isa makona emabhokisi pamativi ese ari maviri, akapatsanurwa zvakaenzana nemativi ½ ebhokisi rakashandiswa uye nepamusoro ¼ rebhokisi sezvakaratidzwa pamufananidzo wekutanga, uyo unofanirwa kucheka mativi ehukuru hwakaenzana. Zvehutsanana uye runako Zvinoenderana nesaizi yebhokisi ratinosarudza. - Tora bepa rekuvhara hafu yebhokisi. Wobva wanamatira glue kana mativi-mativi tepi .. - Uya neimwe divi repepa rakapetwa pamwechete neglue Kana maviri-mativi ekunamatira - tepi zvakare yekusimba uye chokwadi Ehe kwete kudonha. - Pamusoro pebhokisi. Dhinda pakati kuti ukwanise kumativi. Uye peta micheto zvakanaka - uye woisa senge iri pamufananidzo Sunga tepi yakajeka - sunga maribhoni kuyambuka kunge mufananidzo. Kana vamwe venyu mungasazvipfeke zvinoenderana nezvamunofarira uye nehunyanzvi - Sungai uta hwemaruva akaomeswa kana maruva matsva zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu mumwe nemumwe.
6. Akanaka mabhokisi ekushongedza anowedzera ruvara uye mufaro mumhuri.
7. Munguva yekisimusi Mabhokisi anogona kuputirwa nemhando dzakasiyana uye mavara uye akaiswa pasi pemuti. Kana kuisa zvipo zvakati wandei mukati mebhokisi kuti vana vafare vachivhura chipo chavakagamuchira. Fungidzira kuva naSanta Claus. Uyai nezvipo Zvimwe zvinonakidza Uye kugadzira zvidhori zveimba nemhuri neimwe nzira Izvo zvinogona kuitwa newe wega nenzira yakapusa, pamwe nebhokisi rakaputirwa pamoyo Yakagadzirwa nerudo Iye anogamuchira anozoona kuchengetwa uye kufarira. Uye zvakare kusingagumi kusika zvakare Mushure meizvozvo, ngatigadzirirei kugadzira chipo bhokisi sesu !!